Fanentanana momba ny sakafo ara-tsakafo ho an'ny ankizy - Banky Sakafo any Galveston County
Ao anatin'ny fiezahana hanakatona ny banga amin'ny hanoanana amin'ny fotoam-pahavaratra dia nametraka ny programa Kidz Pacz ny Galveston County Food Bank. Mandritra ny volana fahavaratra, maro ireo ankizy miankina amin'ny sakafo maimaim-poana na mihena any an-tsekoly matetika no miady mafy mba hanana sakafo ampy ao an-trano. Amin'ny alàlan'ny programa Kidz Pacz dia manolotra vonona hihinana sakafo izahay ary fonosana ho an'ny ankizy mendrika mandritra ny 10 herinandro mandritra ny volana fahavaratra.
Ny fianakaviana dia tsy maintsy mahafeno ny tabilaon'ny torolàlana momba ny fidiram-bola TEFAP ary mipetraka ao amin'ny County Galveston. Ny zaza dia tsy maintsy eo anelanelan'ny 3 taona ka hatramin'ny 18 taona.
Ahoana no fomba fisoratako anarana amin'ny programa Kidz Pacz?
Jereo ny momba anay sarintany interactif eo ambanin'ny Find Help amin'ny tranokalanay hitadiavana tranokala Kidz Pacz akaikinao. Azafady miantso ny toerana misy ny tranokala hanamafisana ny ora fiasan'ny birao sy ny fizotran'ny fisoratana anarana.
Raha mila fanazavana fanampiny dia mifandraisa amin'i Kelly Boyer amin'ny 409.945.4232 na kelly@galvestoncountyfoodbank.org
Inona no tonga ao amin'ny fonosana sakafo Kidz Pacz?
Ny fonosana tsirairay dia misy kojakoja fisakafoanana 2, sakafo atoandro 2 ary tsakitsaky 2. Ohatra iray mety; Serealy 1 kaopy, bara fisakafoanana 1, raviolis 1, dibera voanjo 1, boaty misy ranom-boankazo 2, mofomamy fromazy 1 kitapo ary kaopy applesauce 4.
Impiry no mahazo fonosana sakafo ny zaza iray mahafeno fepetra?
Ny zaza azo ekena dia mahazo fonosana iray isan-kerinandro mandritra ny faharetan'ny programa izay matetika manomboka amin'ny fiandohan'ny volana jona ka hatramin'ny tapaky ny volana aogositra.
Ahoana no ahatonga ny sekoly na fikambanana ho mpampiantrano fandaharana amin'ny programa Kidz Pacz?
Raha liana ny ho tonga mpampiantrano hizara ny fonosana Kidz Pacz ho an'ny ankizy mandritra ny fahavaratra ianao dia mandefasa mailaka Kely Boyer.
2021 Toerana fampiantranoana
Ireo mpandray anjara dia afaka misoratra anarana amin'ny tranokala iray ihany mandritra ny faharetan'ny programa.
Fisoratana anarana feno amin'ny toerana misy ny tranokala.
Sakafo mahasalama sy ankafizin'ny ankizy dia omena mandritra ny faran'ny herinandro ho an'ireo ankizy atahorana any an-tsekoly kilasy K-12 sy ireo tranokala fisakafoanana fahavaratra. Maro amin'ireo ankizy ireo no miantehitra amin'ny sakafo any am-pianarana mba hanomezana sakafo maraina sy atoandro mandritra ny taom-pianarana. Mandritra ny fialantsasatra, toy ny faran'ny herinandro sy fialantsasatra, maro amin'ireo ankizy ireo no mody tsy misakafo na tsy misy sakafo. Ny programa Backpack Buddy an'ny Galveston County Food dia miasa hamenoana izany banga izany amin'ny alàlan'ny fanomezana sakafo mahasalama sy ankafizin'ny ankizy hoentin'ny ankizy mianatra.
Ny zaza dia tsy maintsy manatrika sekoly nekena ho an'ny Backpack Buddy Program ary ny zaza dia tsy maintsy mahafeno ny sakafo maraina sy ny sakafo atoandro tsy mihena. Raha tsy azonao antoka raha ankatoavina amin'ny sekolin'ny zanakao ny programa dia azonao atao ny manatona ny mpanolo-tsaina ao an-tsekoly.
Ahoana no fomba fisoratako anarana amin'ny zanako amin'ny programa Backpack Buddy?
Raha ekena ny sekolin'ny zanakao amin'ny Backpack Buddy Program, azonao atao ny misoratra anarana ny zanakao amin'ny alàlan'ny fanatonana ny Backpack Buddy Site Coordinator (mazàna ny mpanolotsaina any an-tsekoly na ny solontenan'ny Communities in Schools).
Inona no tonga ao amin'ny fonosana Backpack Buddy?
Ny fonosana tsirairay dia milanja eo anelanelan'ny 7-10 pounds ary misy ireto sakafo manaraka ireto: proteinina 2, voankazo 2, legioma 2, tsakitsaky salama 2, voamaina 1, ary ronono azo antoka.
Impiry no mahazo zaza Backpack Buddy ny zaza mahay?
Ny fonosana dia zaraina isaky ny zoma.
Ahoana ny fisoratana anarana amin'ny sekolin'ny programa Backpack Buddy?
Ny mpiasa misolo tena ny sekoly dia afaka mangataka hiditra amin'ny Backpack Buddy Program amin'ny fitsidihana Eto. Safidio avy eo ny "Misorata anarana hanatevin-daharana ny Program Backpack Buddy 2020/2021".
Raha mila fanontaniana na fanampiana dia mandefasa mailaka Kely Boyer.
Creekside Intermediate School-Ligue City
Ferguson Elementary-Ligue City
League City Elementary-Ligue City
Ralph Parr Elementary-Ligue City
Victory Lakes Intermediate-Ligue City
Bay Colony Elementary-Ligue City
Sekolin'i Dickinson- Dickison
Sekoly afovoany afovoany- Galveston
Hitchcock Kilonga- Hitchcock
Fanombohana lohany voalohany ho an'ny ankizy- Hitchcock
Guajardo Elmentary School- Texas City
Sekoly antonony Levi Fry- Tanànan'i Texas
Roosevelt-Wilson Elementary- Tanànan'i Texas
Taratasy fahazoan-dàlana- anglisy
Taratasy fahazoan-dàlana- Espaniola